Mogadishu Journal » Jamaahiirta Roma oo war farxad leh ka helay xaalada Diego Perotti
Jamaahiirta Roma oo war farxad leh ka helay xaalada Diego Perotti
Mjournal :-Jamaahiirta kooxda Roma ayaa helay war farxad kaasi oo yimid Ciyaaryahanka garbaha ka ciyaara ee Diego Perotti.
Diego perotti ayaa maalmihii lasoo dhaafay yaalay isbitaalka caafimaadka ee naadiga Gillarosi isagoo dhaawac kaga maqnaa kooxdiisa.
Kahor kulanka ay wajahayaan Chievo Axada ayaa tababarkii galabta ay sameesay Clubka Roma waxaa Dhameestay Ciyaaryahan Diego Perotti.
Si lamid ah Florenzi, Mirante iyo Javier Pastore dhamaantooda waxeey u tababarteen si shaqsi ah waxaase macquul ah inay seegaan ciyaarta Chievo.
Waxaa la fahansan yahay in Macalin Eusebio Di Francesco uu weerarka kusoo Bilaabi doono Ciyaaryahanada kala ah Under, Dzeko iyo El Shaarawy kulanka axada ay ciyaarayaan halka De Rossi iyo N’Zonzi ay ciyaari doonaan qeybta dhexe ee garoonka.
Al Shabaab oo qarax la eegtay ciidamo ka tirsan Kenya